नेकपा एसमा प्रवेश गर्न बालेन शाहलाई झाँक्रीको आग्रह, ‘आउनुस् ! सँगै यात्रा गरौं’| Corporate Nepal
जेठ ६, २०७९ शुक्रबार ०८:२१
काठमाडौं । शहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयरका स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन्द्र शाह (बालेन)लाई आफ्नो पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादीमा आउन आउन आग्रह गरेकी छन् ।
उनले काठमाडौंको नजिता दलहरुलाई यो सच्चिने मौका भएको बताइन् । बेलैमा जनताले संकेत दिएको बताउँदै झाँक्रीले नसच्चिए आसन्न निर्वाचनमा दलहरुलाई ठूलो नोक्सान हुने संकेत गरिन् । उनले भनिन्, ‘म मेरो दलको सचिव । अब मैले सोच्नुपर्यो कि त्यो जनमतलाई कसरी ख्याल गर्ने ? मेरो दललाई कसरी रुपान्तरित गर्छु ? एजेण्डा कसरी सेट गर्छु ?’